Hamafisina izay mampitambatra… | NewsMada
Hamafisina izay mampitambatra…
Mbola ny baolina kitra aloha izao no malaza; eny, na eo aza ny faharesen’ny Barea tamin’ny ny ampahefa-dalana amin’ny ”Can 2019”. Na ahoana na ahoana fijery, anisan’ny zava-dehibe (n)entin’ny Barea tamin’ny lalao rehetra nataony ny firaisankinan’ny Malagasy tsivakivolo. Manerana an’i Madagasikara io, hatrany ivelany.
Inona na ahoana koa ny manaraka? Tsy ny fandresena amin’ny lalao fanatanjahantena ihany fa amin’ny zavatra hafa ihany koa. Manana ny maha izy azy ny Malagasy sy i Madagasikara rehefa efa tena vonona amin’izay atrehina, ampy amin’ny enti-manana amin’izay atao, mifanohana hatramin’ny farany…
Amin’izany rehetra izany, mba izay iombonana sy mampiombona amin’izay no iarahana sy hamafisina. Tsy sanatria izay efa fantatra izao fa mety mampisara-bazana, mampifanditra, mampiady an-toerana… Inona avy izany? Maro izay tena mety iombonana sy mampiombona fa tsy fantatra, tsy ampoizina, tsy omen-danja…
Izay heverina ho fahasamihafana, harem-bevava mety hampiray hina, hampatanjaka, handrosoana… Hifamenoana izany fa tsy hifamonoana. Tsy izay no niainana hatramin’izay? Nifampiandrasana kendry tohina, nifanomezan-tsiny lava sy nifampiampangana aza, nifamelezana an-toerana… Samy tomponandraikitra.
Izay tsy mitovy hevitra sy fijery amin’ny tena tsinona, tsaraina sy soketaina avy hatrany ho fahavalom-pirenena. Tsy fahatantesana tsy fitovian-kevitra? Na fitiavan-tena sy fiheveran-tena diso fotsiny izao. Hahagaga raha mitsabaka ho azy ny vahiny? Manoro hevitra, mibaiko, manery, manjakazaka, mivolon-ko tompony…
Koa na misy àry izay mampisaraka, hany amin’izay mety hampiombona aloha no hitondra ny fanazavana, ny famahamana, ny fampifamenoana raha ilaina… Ny adilahy politika sy ny adihevitra tsy mitera-boatsoa no anisan’ny mety tsy mampahita mangirana ny firenena sy ny vahoaka hatramin’izay? Fahantrana lalina sy maharitra…
Hijanona eo amin’izay fiaraha-mirona amin’ny fanohanana ny ekipa Barea izay ve ny firaisankina eo amin’ny samy Malagasy? Na iza na iza, na aiza na aiza…